Akụkọ - Jinjiang Neikeng Town meriri aha "Chinese Shoes City, Slippers Town"
Akpụkpọ ụkwụ mmadụ
Akpụkpọ ụkwụ ubi
Akpụkpọ ụkwụ nwanyị
Akpụkpọ ụkwụ ikike
Akpụkpọ ụkwụ na-arụ ọrụ
Akpụkpọ ụkwụ nchekwa
Akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo
Obodo Jinjiang Neikeng meriri aha "Chinese Shoes City, Slippers Town"
Jinjiang Neikeng Town merie aha nke "Chinese Sọgụ City, Segbugbere ọnụ Tnke onwe"
N'oge na-adịbeghị anya, ndị otu akpụkpọ anụ China mara ọkwa ọha na eze na aha mpaghara njirimara "Chinese shoes city, slippers town" bụ nke Jinjiang Obodo Neikeng , nke obi abụọ adịghị ya na-akpali akpali Jinjiang ụlọ ọrụ slippers a lot na obi. “Ọ bụ ihe ùgwù na ọrụ dịịrị ndị rụsiri ọrụ ike ruo ọtụtụ iri afọ ka a mata ha n'ikpeazụ. "Obere slippers nnukwu ụwa,Jinjiang Ụlọ ọrụ slippers ga-eji ohere a kwalite usoro mmepụta ihe, ịbawanye ego na sayensị na teknụzụ, na ịkwalite Jinjiang slippers ụlọ ọrụ iji gbasawanye na kwalite." Nke a bụ olu otu ụlọ ọrụ.
Kedu ihe amara na-eme Jinjiang Obodo Neikeng ga-enweta nkwanye ugwu a ? Na kedu ka ọ ga-esi Jinjiang ụlọ ọrụ slippers mee “Ochie osisi(ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọdịnala)” mepere “ifuru ọhụrụ(nkwalite ọhụrụ)"? Oleekwa otú ọ ga-esi “China si akpụkpọ ụkwụ slippers obodo -Neikeng” Ndị ọrụ metụtara nyocha otu na Jinjiang slippers ụlọ ọrụ insiders ele Jinjiang ụlọ ọrụ slippers?
Kedu ihe amara na-eme Jinjiang Obodo Neikeng ga-enweta nkwanye ugwu a ?
"China's Shoes City na Slippers obodo" aha mpaghara njirimara, nke a bụ Jinjiang mgbe "obodo akpụkpọ ụkwụ China", "obodo uwe ntụrụndụ nke China", "obodo mkpuchi nke China", "obodo ụlọ ọrụ swimsuit nke China", nsọpụrụ "mba mba" ọzọ.
Dị ka otu nlebanya si kwuo, "mmetụta ụyọkọ doro anya, agbụ ụlọ ọrụ zuru ezu" bụ isi ihe kpatara ya Jinjiang iji merie n'elu.
Jinjiang Obodo bụ isi mmalite nke mpaghara Fujian iji wuo mpaghara akụ na ụba n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Strait. Ọ bụ mpaghara na obodo nwere ike zuru oke na mpaghara Fujian, yana otu n'ime mpaghara na obodo mepere emepe nke akụ na ụba na China. Ọ achịkọtala otu ụyọkọ ụlọ ọrụ na-ahụkarị nke nwere akụ na ụba onwe ya dị ka isi ahụ, dị ka akwa akpụkpọ ụkwụ, akwa na uwe, ceramics ụlọ, nri na ihe ọ drinksụ ,ụ, nche anwụ na ihe egwuregwu ụmụaka. Onye dị mkpa na-ahụ maka obodo Neikeng webatara na n'ime afọ 40 gara aga nke mgbanwe na imeghe, Neikeng etolitela usoro mmepe nke "akpụkpọ ụkwụ ọwụwa anyanwụ na ebe ọdịda anyanwụ", na slippers aghọwo ụlọ ọrụ ogidi omenala. Kemgbe 1980, n'imeObodo Neikeng slippers agabigala n'ụzọ pụrụ iche site n'ọgba aghara gaa n'ọkwa zuru ụwa ọnụ, ma jiri nwayọọ nwayọọ guzobe ụyọkọ mmepụta ihe buru ibu. "Aha nke 'China's Shoe Caolulual · Slippers Famous Town' bụ ịṅa ntị na akụkụ akpụkpọ ụkwụ ma kwalite mmepe ka mma nke akụkụ a".
"Na 70 s na 80 s nke slippers na Obodo Neikeng a na-erekarị n'ahịa ụlọ, iji mee ka mmepe nke ụlọ ọrụ nkeonwe na 90s, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekere òkè na Canton ngosi, na Obodo Neikeng slippers malitere ya iji site mba ọzọ ahia ụlọ ọrụ, na mgbe e mesịrị Enterprise ya oghe Archive ọnụ n'ụwa nile, nke a n'ezie wetara n'ime Obodo Neikeng slippers n'ụwa niile. " N'imeObodo Neikeng nke ochie ọgbọ nke slippers emepụta Mr. Zhang chetara, nakwa n'oge ahụ, na Obodo Neikeng slippers ụlọ ọrụ ọnụ ọgụgụ ka n'ihu gbasaa, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ na-amụba, a ọganihu idaha, kpụrụ na Obodo Neikeng slippers ahia mba ofesi tumadi, agbakwunyere site na ire ahia ulo nke isi ihe.
Mgbe afọ 40 nke mmepe, na Obodo Neikeng slippers ji nwayọọ nwayọọ na-eje ije nke obi ụlọ ọrụ mode nke mmepụta, ka jikọrọ ọnụ na nkọwapụta, si imewe, mmepe, ebu mmepụta, akụrụngwa ọkọnọ na mmepụta, nkwakọ, ahịa, azụmahịa, lọjistik na na nke ọ bụla njikọ zuru ezu ụlọ ọrụ yinye, Nkewa ọrụ zuru oke doro anya, ikike imekọ ihe ọnụ pụtara ìhè, ọnụ ọgụgụ na-agbasawanye n'akwụsịghị akwụsị.
A na-akọ na enwere ihe karịrị ụlọ ọrụ slippers 590 edebanyere aha na ya Jinjiang, na mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị nde 700 ụzọ abụọ na mkpokọta mmepụta ihe karịrị ijeri yuan 10. N'ime ha, mmepụta uru nke ihe karịrị 100 nde yuan ụlọ ọrụ, 22 ụlọ ọrụ, mmepụta uru nke ihe karịrị 5 ijeri yuan na 2017, ngwaahịa na-exported na United States, Vietnam, Philippines, India, South Africa, Western Europe, Middle East na mpaghara ndị ọzọ, bụ ihe dị mkpa mba slippers mmepụta isi.
"Ịkwado nke Jinjiang Obodo Neikeng abụghị naanị nnabata maka mmepe nke ụlọ ọrụ slippers n'ime iri afọ gara aga, kamakwa mmalite ọhụrụ maka mmepe ụlọ ọrụ. Na ndabere nke obodo slippers a ma ama, ihe ọkụkụ miri emi na ọrụ nlezianya, ụkpụrụ siri ike na ihe ndị dị elu chọrọ, n'ime.Obodo Neikeng Ụlọ ọrụ slippers nwere ike ịpụ na ngwaahịa ndị a ma ama na ụlọ ọrụ ndị a ma ama na obodo nke okporo ụzọ ụyọkọ mmepụta ihe. " Wang Wenqi, onye isi oche nke ụlọ ọrụ nyocha nke ụlọ ọrụ nyocha akpụkpọ anụ na akpụkpọ ụkwụ China kwuru.JinjiangỤlọ ọrụ LTD.
Kedu ka ọ ga-esi Jinjiang ụlọ ọrụ slippers mee "Ochie osisi" mepere "ifuru ọhụrụ"?
Nkwanye ugwu nke "Obodo akpụkpọ ụkwụ na obodo a ma ama nke slippers na China" na-enye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ slippers obi ike, ma na-emekwa ka ha ghọta mkpa na ngwa ngwa nke mgbanwe na nkwalite. Agaghị agbagha,Jinjiang Obodo Neikeng ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ na-eche ebe ndị ọzọ na-emepụta slipper ụlọ dị ka asọmpi homogenized, agha ọnụahịa, mkpokọ ebu, ọgba aghara usoro ọrụ na nsogbu ndị ọzọ yiri ya. Jinjiang Obodo Neikeng ụlọ ọrụ slipper ka esi "osisi ochie" mepee "ifuru ọhụrụ"?
Dr. Qin Ge, onye mmekọ nke ụlọ ọrụ na-eche echiche nke onwe onye letara n'ime Obodo Neikeng ụlọ ọrụ slippers, gwara ndị nta akụkọ na tụnyere Brazil na ndị ọzọ dị ike slippers, n'ime Obodo Neikeng Ụlọ ọrụ slippers nwere nnukwu ohere maka mmepe. "N'imeObodo Neikeng Ụlọ ọrụ slippers dị obere ma gbasasịa, enweghị ụlọ ọrụ na-eduga na mpaghara, na mmetụta agglomeration mmepụta ihe adịghị akọwapụta nke ọma. Na mgbakwunye, a ka nwere ọtụtụ ohere maka imeziwanye n'ịrụ ọrụ ika, iche echiche na njikwa.”
Ọtụtụ ụlọ ọrụ slippers n'onwe ha na-achọkwa ụdị mmepe ọhụrụ. Ọmụmaatụ,ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ na-ekwusi ike na r & d na ihe ọhụrụ na akụrụngwa, na-eme ka nkà na ụzụ dịkwuo mma ma na-agbanwe mgbe niile ịrụ ọrụ nke akụrụngwa PVC, nke na-ebelata ọnụ ahịa ụlọ ọrụ. Nkasi obi, nchebe na ịdị nro nke slippers na-emepụta site na akụrụngwa ya bụ ndị ahịa ghọtara. ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụs bụ iji jide ahịa na teknụzụ dị elu, na-elekwasị anya na slippers dị n'èzí dị elu, mmepụta ngwaahịa nwere obi ike, nkwalite nkà na ụzụ na mmelite akụrụngwa, pụọ na ụzọ mmepe pụrụ iche; N'akụkụ aka nke ọzọ,ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ lekwasịrị anya n'ịchịkwa njikọ ahịa na ọrụ ego dị mma. Ọ na-ekwusi ike na azụmahịa ego, nweta "zụta obere ma ree ala", na-azụta akụrụngwa na ọnụ ala dị ala, na-ere akpụkpọ ụkwụ emechara na ọnụahịa dị ala karịa ahịa, ma na-eburu uru ọnụahịa n'ihe banyere uru ma na-ebu asọmpi ahụike.
Ụlọ ọrụ Neikeng slippers na-aghọtakwa na ụlọ ọrụ "na-aga naanị ya", "otu onye na-ejegharị n'ụwa", naanị ụlọ ọrụ ole na ole na-agbaji na ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike ime mgbanwe dị ukwuu. Kedu ka esi esi esi? Ya mere,Jinjiang mmekọrịta gọọmentị na ụlọ ọrụ, mmepe otu ụlọ ọrụ, ka ọ pụọ na ọnọdụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Iji wulite ụlọ ọrụ slippers ka mma. NObodo eikeng tinyekwara mmejuputa iwu zuru oke nke oru “isii nke mbu”, ya bu iwu ogige ulo oru, wuo ahia ndi okachamara, wuo ikpo okwu Intanet, wuo otu ebe nyocha sayensi, wuo otu ndi ndu. ụlọ ọrụ, iji wuo otu nke ama ngwaahịa, Na ịchọpụtakwa mmejuputa iwu nke "mmekọrịta + mmepụta isi + ọkachamara ahịa" mmepe mode.
Otu nleba anya: Jinjiang slippers nwere uru asọmpi ahịa
“Ndị otu nyocha kwenyere na Neikeng Town in Jinjiang emeela ka ọ pụta ìhè uru ya na ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ, na agbụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe zuru oke na ebe mmepe mmepe na-emekarị. Site na mbọ gọọmentị, ndị otu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ, Neikeng Town etolitela n'otu n'ime ebe nrụpụta slippers kasị ukwuu na China. " Nke a bụ nyocha zuru oke nkeJinjiang ime Obodo Neikeng nyere ndị otu nyocha site na nleta, nyocha, nyocha, nzukọ, mkparịta ụka na njikọ ndị ọzọ.
Onye nta akụkọ na ụkpụrụ ntule nke ndị ọbịa, Jinjiang slippers na mba uru, yana mmepe nke Jinjiang slippers ụlọ ọrụ aro na ndị ọzọ okwu, otu onye ndú nke FUjian Province akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ otu odeakwụkwọ General Li Jun ajụjụ ọnụ.
Jinjiang Akụkọ akụ na ụba: nke akụkụ ndị otu nleba anya si enyocha nke ọma Jinjiang slippers?
Li Jun: ụyọkọ ụlọ ọrụ na-ezo aka na nchịkọta nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na ngalaba ndị metụtara ya nwere akụkụ ụfọdụ na mpaghara ụfọdụ, nwere mmetụta nha anya doro anya, ọrụ zuru oke na ọrụ zuru oke. Anyị na-etinye ihe kachasị mkpa na ọnụ ọgụgụ akụ na ụba na mmepe zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ. The ulo oru yinye Ọdịdị nkeJinjiang N'ime Obodo Neikeng, òkè ahịa nke ngwaahịa n'ụlọ na ná mba ọzọ, iwu nke ikpo okwu ọha na eze na akụkụ ndị ọzọ dịkwa n'ime oke nke nyocha anyị.
N'ezie, otu ụlọ ọrụ na-adigide mmepe, ya ụlọ ọrụ, Enterprise ọhụrụ na mmepe, àgwà ika, nwere ọgụgụ isi n'ichepụta, ụyọkọ n'ichepụta, ọrụ n'ichepụta, onye ọrụ ọzụzụ, ulo oru nkwalite, ụlọ ọrụ-obodo mwekota na ndị ọzọ akụkụ nke ọnọdụ, anyị ga-nyochaa. n'ọdịnihu enwere ike ịtụ anya oge oge. Ugbua,NỤlọ ọrụ eikeng slippers ewepụtala uru asatọ, dị ka ọnụ ọgụgụ, ngwaahịa, njem mpaghara, usoro, ika, ahịa, nchebe gburugburu ebe obibi na ihe ọhụrụ. A kwenyere na ọrụ miri emi na nke siri ike na-aga n'ihu nwere ike iduga ụyọkọ mmepụta ihe nwere ngwaahịa ndị a ma ama, ụlọ ọrụ ama ama na obodo ndị a ma ama.
Jinjiang Akụkọ gbasara akụ na ụba: ma e jiri ya tụnyere mpaghara ndị ọzọ na-emepụta slippers na China, kedu njirimara na uru ọ na-eme Jinjiang nwere slippers?
Li Jun: Àgwà kasịnụ nke Jinjiang slippers bụ na ngwaahịa ndị bara ọgaranya na imewe, dịgasị iche iche na àgwà. Ngwaahịa nwere ike ịbụ Japan, Europe ụfọdụ mba ndị na-azụ ahịa na-amasị, na-egosi naJinjiang ngwaahịa slippers nwere ụfọdụ uru na asọmpi. N'ezie, nke a uru bụkwa ihe kasị kwesịrị ịkwado n'oge. Ụlọ ọrụ kwesịrị ịmepụta ngwaahịa dị mma, ngwaahịa ndị dị nro, ngwaahịa ndị dị elu, iji gbanwee mmetụta dị ala dị ala nke mmepụta China.
N'ihe dị ka afọ 1998. Jinjiang akpọrọ aha ya dị ka “Shoe Caolulual of China", nke nwere teknụzụ na-eme akpụkpọ ụkwụ tozuru oke na agbụ ụlọ ọrụ, nke bụ isi ihe na China Akpụkpọ anụ Association na-ewere a fancy na-eme n'ọdịnihu mmepe nke. Jinjiang ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ, nke a bụkwa uru nke ebe ndị ọzọ na-emepụta slippers enweghị. N'otu oge ahụ,Minnan ndị mmadụ hụrụ n'anya na-alụ ọgụ ma na-amaja imeri mmụọ dị omimi n'ime ụmị ọkpụkpụ, bara uru, ekwenyere m na ịdị adị nke mmụọ a, Jinjiang ụlọ ọrụ slippers nwere ike inye anyị ihe ịtụnanya.
Jinjiang Akụkọ akụ na ụba: Kedu aro ndị otu nyocha nwere maka mmepe n'ọdịnihu Jinjiang ụlọ ọrụ slipper?
Li: ngwaahịa ka bụ ntọala nke ihe niile, enweghị ikewapụ na nyocha na mmepe na imepụta ngwaahịa, na-atụ anya Jinjiang ụlọ ọrụ slippers nwere ike ịbawanye ego na nyocha ngwaahịa na mmepe, site na ihe ọhụrụ na-arụ ọrụ, nkà na ụzụ ọhụrụ na ihe ọhụrụ, na-akwalite uru nke ngwaahịa ahụ, na-ewusi otu ndị na-emepụta ihe ike, mmeghe ma ọ bụ ọzụzụ ọkachamara imewe talent, na-abawanye ojiji nke mkpa imewe akụrụngwa.
Naanị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mmepe na-adigide nwere ike iweta ume ọhụrụ na ụlọ ọrụ. Jinjiang Ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ kwesịrị ime ngwa ngwa na-ewu usoro nhazi, na-ewusi njikwa nke ngwaahịa ngwaahịa, na-emeziwanye usoro mmepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe niile, ma mepụta agbụ ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'otu oge ahụ,Jinjiang nwere ike mee ngwangwa atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na slippers, na-eme ka mgbanwe mgbanwe na nkwalite ụlọ ọrụ dịkwuo elu, ma na-arụsi ọrụ ike na-akwalite nhazi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Oge nzipu: Ọgọst-17-2021
Adreesị: Tu an Industry Park, Neikeng Town, Jinjiang, Fujian China
Kedu ụdị mkpofu nke slippers mkpofu na-abụ...
Ugboro ole ka a ga-asacha slippers a...
Kedu ihe bụ EVA material?
Njikwa okpukpu abụọ nke oriri ike - Eziokwu...